घरमै आइसोलेसनमा बस्दा सास फेर्न गाह्रो भयो भने के गर्ने ? अपनाउनुहोस् यी ९ उपाय – Sapana Sanjal
नेपालमा अहिले कोरोनोको दोस्रो लहरको चलिरहेको छ । दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढेको छ ।पहिलो लहरको महामारीमा भन्दा अहिले कोरोना ७० प्रतिशत बढी संक्रामक भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन कमि हुनु निकै ठुलो समस्या हो । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टले स्वाँसप्रस्वास निकै समस्या आइरहेको बताइएको छ।
वैज्ञानिकहरूले त्यस्तो प्रतिरोधात्मक प्रतिकार्यलाई रोकेर हेर्दा कोभिड गराउने भाइरसको तह राइनोभाइरस नभएको अवस्थामा जस्तै बढेको पाए। तर रुघा निको भइसकेपछि तथा राइनोभाइरसको प्रतिरोधात्मक प्रतिकार्य निस्तेज भइसकेपछि कोभिड हुने सम्भावना कायम रहन्छ। “खोप, सरसफाइका उपाय अनि भाइरसहरूबीच हुने अन्तर्क्रियाले सार्स-कोभ-२ ठूलो मात्रामा घटाउन सक्छ। तर खोपबाट नै अधिकतम प्रभाव पर्छ,” डा. मर्सियाले भने।
Next२ दिन अघि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा स्वाव दिएर फर्केका, उपसचिव कृष्ण खनालको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु